Sheeko Calaamadeysan - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Sumadda kale ee shirkadda YangLi, waxay diiradda saareysaa qabashada khaanadaha jikada, armaajooyinka musqusha, qalabka guryaha. "Geriss" waxaa loogu talagalay bogag qarsoodi ah oo qarsoodi ah, nidaamka sanduuqa birta, maareynta qadiimiga ah ee yurubiyanka iyo gacmo casri ah oo ku raaxeysta sumcad sare macaamiisha foornada.
Asalka hal abuurka Geriss: "G" wuxuu metelaa tareenka, wuxuu u horseeday YangLi aduunka, "R" wuxuu matalaa Yang Liren, dadka Yang Li oo u hogaansamaya "togan iyo nabad, Li Bo iyo kan ugu sareeya" falsafada ganacsiga, u ololeynta nabada, sinnaanta nolosha, isku kalsoonida, isku kalsoonaanta, is xoojinta iyo ruuxa hal-abuurka, si loogu abuuro macaamiisha tayo raaxo leh, waxay ku raaxeysanayaan sharaf sare oo ay ku leeyihiin golaha wasiirada Mareykanka, warshadaha alwaaxda adag.
Sawirada Yanlgi ee qiiqaya, qashin qubka, iyo qalabka foornada waxaa lagu shaabadeeyay astaan. "Y" ee YANGLI wuxuu matalayaa qoolleyda nabadda, waxay ka dhigan tahay Shirkadda Yangli inay shiddo shakhsiyad sinnaan, ganacsi nabadeed, u hoggaansan sharciga iyo qaanuunka qandaraaska. Waad xor u noqon kartaa inaad duusho. Nooca 'YANGLI' waxaa la aasaasay ku dhowaad 20 sano, oo leh tayo sarreysa, qiimo macquul ah, wuxuu ku raaxeystaa sharaf sare oo ka jirta warshadaha alaabada Yurub iyo Ameerika.
Sumadda saddexaad ee shirkadda Yangli, waxay diiradda saareysaa nidaamka qaanadaha birta ah, bogagga qarsoon, bogagga lagu dhajiyo kubbadda, fallaaraha iwm. NOLOLKA ayaa loo soo gaabiyay "FEAL SARE OO SARE" Macnaheedu waa waxaan ku dadaalaynaa inaan u abuurno alaab tayo sare leh macaamiisheena.